Nhau - Chii chinonzi balustrade (kana chokurukisa)?
Chii chinonzi balustrade (kana chokurukisa)?
Kunyangwe iwe ungasazive chaizvo kuti chii balustrade / chokurukisa chiri, iwe pamwe unosangana neimwe kakawanda kupfuura zvaungatarisira. Yakawanikwa yakamhara yakawanda masitepisi uye masitepisi, balustrade / spindle mutsara wemakoramu madiki akakwidzwa nechitima. Izwi iri rinotorwa kubva kune zvimiro zvemafomu, zvinodaidzwa kuti balusters, zita rakaumbwa muzana ramakore regumi nenomwe (17th-century) iro rechinhu chakafanana nekukura kwemaruva etamba (balaustra muchiItaly). "Mashandiro ebalustrade aya kuwanda, kubva pakudzivirira kana kudzikisira mukana wekuti munhu adonhe kubva pamasitepisi kuenda kunzvimbo yakasungirirwa kuitira zvakavanzika.
Iyo yekutanga mienzaniso yemabharustrade anobva kune ekare bas-zvidhori, kana zvakavezwa zvakavezwa, zvakatangira kubva imwe nguva pakati pe 13th uye 7th century BC Mukuratidzwa kwemazinda eAsiriya, balustrade dzaigona kuoneka dzakakomberedza mahwindo. Sezvineiwo, hazviratidzike panguva yezvivakwa zvechiGiriki nevechiRoma (pane, zvirinani, hapana matongo ekuratidza kuvapo kwavo), asi anomuka mukupera kwezana ramakore regumi neshanu, apo aishandiswa mumizinda yeItaly.
Muenzaniso wakatanhamara weakavakwa kare wakashongedza Nhare yeVélez Blanco, chivakwa cheSpain chemuzana ramakore rechi 16 chakagadzirwa nenzira yeItaly Renaissance. Iyo yakaoma marble balustrade yakamisidzana yechipiri-yepasi nzira yakatarisa ruvanze. Chishongo chakakomberedza tara chakabviswa muna 1904 uye pakupedzisira chakatengeswa kune mubhangi George Blumenthal, uyo akachiisa mutaundi rake reManhattan. Patio kubva ipapo yakavakwazve muNew York Metropolitan Museum yeArt.
Balustrades / Spindles ari kuenderera mberi kushandiswa seanhasi mune akasiyana maumbirwo uye zvigadzirwa, kubva pamatanda akareruka emapango kusvika kune akajeka akagadzirwa-simbi spindle, kune ese ari maviri ekushongedza uye anoshanda zvinangwa.